Samsung Galaxy Note 7 ayaa qarxay inta lacag la dalacayo | Wararka IPhone
Samsung Galaxy Note 7 ayaa qarxisa inta ay lacag bixinayso
Batariyadaas lithium waxay u muuqdaan kuwo si iskiis ah u gubta munaasabadaha waa wax aan wada ognahay. Xaqiiqda layaabka leh ayaa ah inay ku dhacdo aalad cusub, sida Samsung Galaxy Note 7, waxaanan haynaa wararkii ugu horreeyay ee qalab gubtay intii lagu jiray amarka, iyadoo laga cabsi qabo. Nasiib wanaagse, ma jirin khasaarooyin ka badan inta ay le’eg tahay khasaaraha naadiga ah. Maaha kii ugu horreeyay mana noqon doono warkii ugu dambeeyay ee aan hayno dhammaan bilaha aaladaha gubanayaIntaas waxaa sii dheer, imaatinka xagaaga iyo heerkulka sare, xaaladahaas halista ah waxay u muuqdaan kuwo aad u badan.
Si kastaba ha noqotee, wax walbaa ma aha sida madow sida ay u rinjiyeyn karaan, waa in la ogaadaa in isticmaalaha uu ku soo oogay Galaxy Note 7 adabbar, maxaa yeelay nooca Kuuriya ee Samsung Galaxy Note 7 wuxuu leeyahay USB-C, iyo isticmaalaha wuxuu adeegsaday isku xira microUSB adoo adeegsanaya adabtarada kor ku xusan. Waxaan hubnaa in adeegsiga qalabkan uu dabku sababay. Ma aha dhibaatada ugu horreysa ee ay keento noocan ah qalabyada adabtarada, gaar ahaan markaan ka hadlayno USB-C, oo ah mid dhexdhexaad ah oo leh awood aad uga badan inta aan qaadanno.
Si kastaba ha noqotee, tani maahan khilaafka ugu xiisaha badan ee Samsung Galaxy Note 7 ay ku lug leedahay, gaar ahaan dhaleeceyn badan ayaa ka da'ay waxqabadka hooseeya ee ay bixiso, in kasta oo ay leedahay qalab ka kooban tiknoolajiyada ugu caansan ee qaybta. Dhanka kale, Waxay sidoo kale dhaleeceeyeen sida fudud ee loo xoqdo hore iyo gadaal, lama arag qalab heer sare ah oo sidaas ah. Si kastaba ha noqotee, markii uu shilkani dhacay, Samsung waxay bilowday inay baarto, iyada oo ujeedkeedu yahay in la caddeeyo haddii ay sabab u ahayd dhibaato soo saarid ama haddii ay dhab ahaantii keentay adabtaraha isticmaalaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung Galaxy Note 7 ayaa qarxisa inta ay lacag bixinayso
Waad salaaman tihiin. Haddii ay si weyn u saameyn karto qaladka wax soo saarka, naqshadeynta liidata ama cilladaha qeyb ka mid ah, sida qaar kamida laptop-yada dell ee si lama filaan ah dabka u qabsaday qalad batteri awgood. Waxay sidoo kale noqon kartaa taxaddar la'aan ama qalad adeegsade kaas oo halisteeda leh. Xeedho cilladaysan, xaalad liidata ama dayacaad fudud oo adeegsadaha ayaa ka dhalin kara wareegga gaaban si uu u dilo qofka. Dhibaatadu waxay tahay in dad badan oo waxyeelleeyay xeedho ama fiilada ay iibsadaan qalabka rakhiis ah oo ay keenaan qalab qiimahoodu dhan yahay boqol oo yuuro oo wata agab ka yar 5 euro oo aan la kulmin xitaa amniga ugu yar.
Gabagabadii, hadii shirkadu khalad ku leedahay arinta, ha masuul ka noqoto lakiin hadii ay tahay adeegsade, iyadoo la ogyahay inaysan ahayn qalab sax ah oo hadana adeegsada, inay iyaduna masuuliyadeeda qaadeyso.
Sidee ayey ku habboon tahay in doqon bixiya ku dhowaad 900 oo doolar taleefan cusub si uu ugu soo dallaco adabtarada oo uusan ku xirin xeedho asalka ah ka dibna u soo dhigno sawirrada taleefankiisa gubtay, goorma ayuu IPHONE 7 soo baxayaa?
Ha rabin inaad xaabo ka sameysato, in Apple uusan dooneynin inuu ogaado qiimaha uu ku kacayo Samsung, ha allifin inuu taleefanku leeyahay waxqabad xumo, taasi waa been, iyagu iskuma liidayaan habkaas, in 32 taleefan ay leeyihiin la gubay waa run, laakiin ha u maleegin inuu si hoose u shaqeynayo, taasi waxay muujineysaa oo keliya cabsida iyo quusta tufaaxa.
Waxaan hayaa ogeysiiska 7 ilaa iyo hada wax dhib ah kuma qabin, waxaad ku dhufatay barta saxda ah, waxay ka qaadaan mobilada xeedho kasta oo aan ahayn tan asalka ah. Waa mid aad u cad oo ujeedo leh, waan ka helay aragtidaada.
Waad salaaman tihiin. Waxaan rabaa inaan iibsado Xusuus-qor 7. Waxaan u baahanahay inaan ogaado inaad hayso Xusuus-qor 7.
Tan iyo markii aad dhahdo waxay kuu shaqaysaa waxyaabo yaab leh. Waxaan ka imid Arjantiin, halkan Argentinana durba way iibinayaan laakiin ma ogi inaan iibsado iyo in kale. Waxaan kaaga tagayaa WhatsApp-kayga si aad iigu wargalisid. Waan ku qanacsanahay. +543815408579
VPN Master Pro lacag la'aan wakhti xadidan
Pokémon GO waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo tababarka cusub wuxuuna balan qaadayaa warar muhiim ah